तपाई को राशिफल Feb 10 – Ask Jyotish
तपाई को राशिफल Feb 10
तपाई को राशिफल
मेष : आजको दिन अनुकुल छ । खर्च बढ्ने देखिनुक साथसाथै राम्रो कामहरु बनेर जानेछन । पढाइमा हल्का सुधार हुदैजाने छ । हल्का रातो र सेतो रंग राम्रो छ आज तपाइँ को लागि । आफन्तबाट सधै जसो गनगन सुन्नुपर्ने नै छ। दान गर्न नभुल्नु होला । आफ्नो राशी को स्वभाव थाहा पुन यहाँ क्लिक गर्नु होला।
वृष: दिन अनुकुल छ । परिवारजान बाट सुखुप्रप्ति को योग पनि छ । आज उच्च आम्दानी हुने देखिन्छ । कुनै पुरानो रोग भए आराम हुदै जाने सकेत पाउनुहुनेछ । काम मा खटपट हुने छ भने साथी भाइ सग राम्रो सम्बन्ध भएर जाने छ । आफ्नो राशी को स्वभाव थाहा पुन यहाँ क्लिक गर्नु होला।
मिथुन: मिथुन राशीका मानिसलाइ आज को यो हप्ता भरि त्यति राम्रो छैन । प्रेमिका बाट फाइदा नै हुने चाह भने विवाहित हुने हरु मा सामान्य वादविवाद पर्ने देखिन्छ । बोल्दा र समन्ध सुधार मा ध्यान दिनु होला । माता पिता को सरसहयोग पाई राख्नु हुनेछ । काम खोजि रहेका हरु ले राम्रो समाचार सुन्न सक्नु हुनेछ । आफ्नो राशी को स्वभाव थाहा पुन यहाँ क्लिक गर्नु होला।
कर्कट : राहु स्वोराशी मा भएको ले आफुलाई धेरै महत्वाकांक्षी भेट्नुहुनेछ । सत्रु हरु बढेतापनि तपाइको उर्जा सक्तिले ति सत्रुहरु परस्त भएर जानेछन । सोचेको कामहरु बन्ने छन् । प्रेममा सफलता मिल्ने छ । भाग्य बढेर जाने योग परेको हुनाले वैदेशिक यात्रा को अवसरहरु आउने देखिन्छ । आकस्मिक लाभ हुनसक्ने छ । आफ्नो राशी को स्वभाव थाहा पुन यहाँ क्लिक गर्नु होला।
सिंह : आजको तपाइको दिन अनुकुल छ । मित्रहरु को सहयोग प्राप्त हुन्छ । सोचेको कामहरु पुरा भएर जाने छ । प्रेममा सफलता हुने सगसगै पढाईमा मन बढ्ने छ । मान सम्मान पनि बढ्ने देखिन्छ । स्वस्थमा सुधार लेउन धेरै भन्दा धेरै पानि पिउनु होला । सन्तान प्राप्तिको योग पनि परेको छ । श्रीमती सग वा श्रीमान सग झगडा गर्ने प्रयास नगर्नु होला, अरु यो हप्ता राम्रो भएर जाने छ । आफ्नो राशी को स्वभाव थाहा पुन यहाँ क्लिक गर्नु होला।
कन्या : समय अनुकुल छ । हिम्मत बढ्ने देखिन्छ भने सत्रु अथवा प्रतिस्पर्धी सग जित हुने देखिन्छ । मानसम्मान बढ्ने, छोटो यात्रा हुनेछ भने प्रेममा असफल हुन सकिनेछ त्यसकारण होस् पुर्याएर निर्णय लिनु होला । भुतकाल को कुनै विषय वा घटनालाई राम्रो सग चिन्तन गरेर आगाडी बढ्दा राम्रो होला । मोटर गाडी हरु बाट बच्नु होला वा नया सवारी किन्दा होसियारी भने अवास्वे अपनाउनु होला । आफ्नो राशी को स्वभाव थाहा पुन यहाँ क्लिक गर्नु होला।
तुला : समय वलमान छन् । स्त्री वा पुरुस सग आकर्षण बड्नेछ भने वा कुनै प्रेमी प्रेमिका भए प्रेमको प्रपोज गर्ने बेला पनि आएको छ । स्वस्थमा गडबडी देखिन्छ । प्रतिश्पर्दा हुने संकेत देखिएता पनि तपाइको जीत सुनिस्चित प्राय देखिञ्छ । सातौ मंगलले भने श्रीमान श्रीमती बीच बाद विवाद बढाउने छ भने कति श्रीमान वा श्रेमति लाइ बेग्लै किसिमको हिम्मत प्रधान पनि यो मंगल ले गर्न सक्नेछ । गणेश को पुञ्ज अर्चना गर्नाले सहज हुने देखिञ्छ। आफ्नो राशी को स्वभाव थाहा पुन यहाँ क्लिक गर्नु होला।
वृश्चिक : आजको दिन अनि यो हप्ता प्राय तपाइको लागि अनकुल सिद्ध हुनेछ । प्रेममा सफलता अवास्ये मिल्ने छ भने प्रतिश्पर्दा नगर्दा नै राम्रो होला वा समय र आफ्नो पराक्रम को अनुरुप नै कार्य गर्नु होला। भनेको काम तुरुन्तै बन्ने छ भने आफ्नो बोलि को प्रभाव अझ दुइ गुना बडेर जाने योग परेको छ। आफ्नो बोलि को प्रयोग ठिक ठाउमा गर्न जान्ने मानिसको कार्य सफलता झन् झन् बढ्दै जाने छ। आफ्नो राशी को स्वभाव थाहा पुन यहाँ क्लिक गर्नु होला।
धनु : शनि र शुक्र को मिलन ले पहिला बाट नै प्रताडित बनिरहेको बेला तपाई को मान केहि हद सम्म शान्त हुने देखिञ्छ। आमा को साथ र सहयोग ले गर्दा धेरै आगाडी बढ्नु हुने छ । प्रेममा हिम्मत देखाउनु पर्ने छ । येदि प्रेममा हुनुहुन्छा भने यो राम्रो मौका हो तपाइको लागि आफ्नो प्रेमको कुरा लाइ आगाडी बढाउने । शनि देव को मन्त्र जाप गर्नाले दिन हरु राम्रो भएर जाने छ। आफ्नो राशी को स्वभाव थाहा पुन यहाँ क्लिक गर्नु होला।
मकर : समय वलवान छ । तपाइँ ले आफ्नो परिश्श्र्म देखाउने बेला आएको छ । धन आर्जन गर्ने प्रशस्त मध्यम हरु देखा पर्ने छन् । वाहन को योग पनि परेको छ । उच्च सिक्क्षा को लागि पनि राम्रो दिन हरु छन् । सुर्य को पुजा गर्नाले राम्रो भएर जाने छ। आफ्नो राशी को स्वभाव थाहा पुन यहाँ क्लिक गर्नु होला।
कुम्भ : समय त्यति राम्रो नभएता पनि तपाइको बोलि को प्रभाब भने देखिने छ । खानपान मा राम्रो ध्यान दिनु होला । आफ्नो कर्म ले गर्दा राम्रो सफलता हात पर्नु हुने छ। आय आजन हुने देखिञ्छ । सत्रु हरु बाट भय रहित भएर आगाडी बढ्नु होला। सफलता तपाइँ को हात मा छ। आफ्नो राशी को स्वभाव थाहा पुन यहाँ क्लिक गर्नु होला।
मीन : समय राम्रो छ । प्रेममा सफल हुन निकै प्रयास गर्नु पर्ने देखिञ्छ । आय आर्जन मा सोच विचार गर्नु पर्ने देखिञ्छ भने उच्च सिक्क्षा को लागि भनेर आगाडी बढ्नु मा बुद्धिमानी हुनेछ र सफलता पाउन थोरै मेहेनत ले पनि राम्रो फल प्रदान गर्ने छ। आफ्नो राशी को स्वभाव थाहा पुन यहाँ क्लिक गर्नु होला।
ज्योतिष सल्लाह लिनु परेमा : Jyotish Prakash Basistha
नेपाली ज्योतिष फसेबूक ग्रुप जोइन हुन परेमा फ्री :
निरन्तर राशिफल आफ्नो इमेल मा पाउन SUBSCRIBE गर्नु होला।\_
Askjyotish.com | Jyotish Prakash Basistha
PrevPreviousIs your Aura depressed? And You?
NextThe effect of Rahu and Ketu 2019Next